उज्ज्वल छ, समाजवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
उज्ज्वल छ, समाजवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य
२०७१ फाल्गुन १८, सोमबार ०१:५६ गते
सधैँ नै प्रारम्भमा कुनै पनि नया“ शक्तिहरु कमजोर भैरहेका हुन्छन् र पुराना शक्तिहरु त्यत्तिकै शक्तिशाली देखिन्छन् । तर, स्थिति सधैँ एकै प्रकारको रहन्न । त्यसमा लगातार परिवर्तन हु“दै जान्छ । कुनै बेला पुरानाको जित हुन्छ, नया“ शक्तिहलाई दबाउनु सम्भव हुन्छ । तर, त्यस प्रकारको दमन र पराजयका बाबजुद नया“ शक्तिहरुले सङ्घर्षमा सफलता प्राप्त गर्दै जान्छ र अन्तमा उनीहरुलाई विजय प्राप्त हुन्छ । तर, कुनै बेला नया“ उदीयमान शक्तिको विजय प्राप्त भएपछि त्यो एकैपल्ट स्थायी हुन्छ भन्ने होइन । प्रत्येक विजयपछि कैयौ“पल्ट पराजयको सम्भावना हुन्छ । क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको सम्भावना हुन्छ । विश्वको इतिहासले लगातार त्यो कुरा सिद्ध गर्दै आएको छ ।
निरङ्कुश राजतन्त्र वा राजतन्त्रविरूद्ध गणतन्त्रको सङ्घर्षको विजयको इतिहासलाई हेरौ“ । इङ्ल्यान्डमा राजतन्त्रका विरूद्धको सङ्घर्षमा अन्तमा प्रजातन्त्रको विजय भयो । तर, अन्तिम विजयभन्दा पहिले कैयौ“पल्ट पराजयको सामना गर्नु परेको थियो । अन्तमा प्रजातन्त्रको नै विजय भयो । त्यहा“ अझै राजतन्त्र कायम छ । तर, त्यो वैधानिक रुपमा कायम छ र त्यसको निरङ्कुश स्वरुप समाप्त भइसकेको छ । फ्रान्समा गणतन्त्र स्थायी हुनुभन्दा पहिले बारम्बार राजतन्त्रको पुनःस्थापना भएको थियो । तर, अन्तमा त्यहा“ राजतन्त्र वा सामन्तवादको अन्त भयो । मूल रुपमा कुनै बेला कुन पक्षसित कति शक्ति छभन्दा पनि निर्णयात्मक फैसला भौतिक पक्षले गर्दछ । अन्तिम विजय उदीयमान शक्तिहरुको नै हुन्छ । दास मालिकहरुको ठूलो शक्ति हुनुका बाबजुद उनीहरुको हार भयो र विश्वव्यापी रुपमा त्यो युगको अन्त भयो । किनभने, उनीहरुको भौतिक आधारको अन्त भएको थियो, त्यही प्रकारले क्रमशः राजतन्त्र र सामन्तवादको विश्वव्यापी व्यवस्था हुनुका बाबजुद वा उनीहरुको ठूला, विशाल राज्य वा साम्राज्यहरु हुनुका बाबजुद उनीहरुको हार भयो । किनभने, जुन प्रकारको उत्पादक शक्तिहरु वा भौतिक परिस्थितिले उनीहरुलाई अगाडि ल्याएको थियो वा उनीहरुलाई शक्तिशाली बनाएको थियो, तिनीहरुको नास भैसकेको थियो । त्यो अवस्थामा सामन्तवादको विश्वव्यापी हार वा अन्त अवश्यंभावी थियो । त्यही प्रकारको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पुँजीवाद वा त्यसका विरूद्ध समाजवादको सङ्घर्षलाई पनि बुझ्नुपर्दछ ।
पुँजीवादी व्यवस्था एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था हो । त्यसको एउटा मह¤वपूर्ण विशेषता यो रहेको छ कि त्यसअन्तर्गत अर्थव्यवस्था, विचार, मानिसहरुको पारस्परिक सम्बन्ध, राजनीतिक क्रियाकलाप आदिले अन्तर्राष्ट्रिय रुप दि“दै जान्छन् र अहिलेको विश्वमा त्यो प्रक्रिया धेरै नै अगाडि बढेको छ । पहिलेका सबै वर्गसङ्घर्षको रुप स्थानीय वा राष्ट्रिय प्रकारको हुन्थ्यो भने पुँजीवादका विरूद्धको वर्गसङ्घर्ष, मजदुर आन्दोलन वा समाजवादी आन्दोलनले विश्वव्यापी रुप लि“दै गएको छ । त्यसरी त्यसको प्रकृति पहिलेका सबै आन्दोलनभन्दा कैयौ“ गुना व्यापक हुन्छ । एउटा अर्को कारणले त्यसको प्रकृति पहिलेका सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनको भन्दा गुणात्मक प्रकारले बेग्लै हुन्छ । पहिलेका सबै आन्दोलनहरु विद्यमान शोषणप्रधान व्यवस्थाभित्र एउटा शासक वर्गका ठाउ“मा अर्को शासक सत्तारुढ हुन गरिएका आन्दोलनहरु थिए । तर, समाजवादी आन्दोलन अहिलेसम्म कायम भएको शोषणप्रधान व्यवस्थालाई सम्पूर्ण रुपले अन्त गर्ने वा सबै शोषणहरुलाई अपदस्थ गर्ने आन्दोलन हो । त्यसैले, त्यो आन्दोलन पहिलेका सबै आन्दोलनहरुभन्दा कठिन हुने र त्यसका लागि लामो समय लाग्ने कुरा प्रस्ट छ । आफ्नो त्यस प्रकारको चरित्रका कारणले त्यो आन्दोलन पहिलेका सबै आन्दोलनहरुभन्दा कैयौ“ गुणा बढी उथलपुथल, विजय र पराजय वा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिहरुका बीचबाट गुज्रेर जाने कुरा प्रस्ट छ । शोषकहरुका लागि त्यो अन्तिम, जीवन–मरण वा अस्तित्वको लडाइ“ हो । त्यसैले, उनीहरुले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पराजित गर्न पूरा शक्ति लगाउने छन् । तैपनि, त्यो लडाइ“को प्रधान पक्ष यो हो कि विश्वव्यापी रुपमा समाजवादको भौतिक आधार तयार भएको छ । त्यसैले, समाजवादको विजय अवश्यंभावी छ । इतिहासमा सधैझै“ अहिले पनि कसको कति शक्ति छ ? त्यो कुराले होइन, कसको पक्षमा भौतिक आधार छ वा छैन ? त्यो कुराका आधारमा नै अन्तमा कसले जित्नेछ ? त्यो कुराको फैसला हुन्छ । अहिले पुँजीवादले उत्पादन प्रणालीलाई सामाजिक रुप दिइसकेकाले र भूमण्डलीकरणले त्यो प्रक्रियालाई अरु तीव्र वा व्यापक पार्दै लगेकाले समाजवादको विश्वव्यापी रुपमा नै आधार तयार भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
प्रथम विश्वयुद्धका बेलामा रुसमा समाजवादी क्रान्ति तथा द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा विश्व समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अकस्मात् भएका थिएनन् । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रकाशन भएपछि करिब ७ दशकको विश्वस्तरमा चलेको लामो र कठिन सङ्घर्षपछि रुसमा समाजवादी क्रान्ति भएको थियो । करिब एक शताब्दीको सङ्घर्षपछि विश्व समाजवादी व्यवस्था कायम भएको थियो । तर, अहिले समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएको छ । त्यसका आधारमा कम्युनिस्ट वा समाजवादका विरोधीहरुले माक्र्सवादी दर्शन गलत सावित भएको तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनै भविष्य नभएको बताउ“दै छन् । तर, यहा“ यो उल्लेखनीय छ कि अहिले विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएका कारणले होइन, माक्र्सवादको जन्मकालदेखि नै त्यसलाई गलत बताउने काम हु“दै आएको छ । बिसौ“ शताब्दीको प्रारम्भमा बर्नस्टिनले माक्र्सवाद गलत भैसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, त्यसपछि रुसमा समाजवादी क्रान्ति र विश्व समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा आज माक्र्सवाद गलत भएको घोषणा गरिन्छ भने त्यो कुनै नया“ कुरा होइन । वास्तवमा त्यस प्रकारको विचारले वास्तविकताको होइन, समाजवादका विरोधीहरुको इच्छालाई नै बताउ“छ ।
एउटै शोषणप्रधान व्यवस्थाअन्तर्गत मात्रात्मक प्रकारका परिवर्तनहरुका लागि चलेका स्थानीय वा राष्ट्रिय सङ्घर्षहरु अन्तिम रुपमा र सफलता वा विजयमा पुग्नुभन्दा पहिले कैयौ“पल्ट असफलता वा प्रतिक्रान्तिका बीचबाट गएका थिए । शोषणप्रधान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि चल्ने समाजवादी आन्दोलन अरु सबै आन्दोलनहरुभन्दा पराजय र प्रतिक्रान्तिको लामो वा विश्वव्यापी शृङ्खलाबाट जान्छ भने त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा हुनेछैन । संसारमा दासप्रथा, राजतन्त्र वा सामन्तवादका विरूद्ध कैयौ“ सङ्घर्षहरु अन्तमा सफल भएका थिए । त्यसै गरेर कैयौ“ विश्वव्यापी पराजय वा प्रतिक्रान्तिहरु भए पनि तिनीहरुका कारणले समाजवादको अन्तिम पराजय भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु इतिहासको अनुभवसित मेल नखाने कुरा हो । विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतन भयो र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले अत्यन्त कमजोर भएको छ वा रक्षात्मक अवस्थामा छ । तर, त्यसको अर्थ त्यसको सम्पूर्ण रुपले पतन भयो, त्यसको कुनै भविष्य छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु सही हुनेछैन । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा भएका कारणले मात्र होइन, कुनै बेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्पूर्ण रुपमा समाप्त भयो भने पनि भौतिक परिस्थितिले पुनः नया“ प्रकारले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि ल्याउने छ र त्यसको विजय हुनेछ ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्धको सङ्घर्षको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । २०१७ साल पौष १ गते राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि, पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भएपछि र ठूलो सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु त्यसमा सामेल भएपछि पञ्चायती शासकवर्गले त्यसलाई निर्विकल्प बताउन थालेका थिए । आफ्नो समयमा त्यो निकै शक्तिशाली पनि थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको पराजय भएपछि पञ्चहरुले यो बताउन थालेका थिए कि अब नेपालमा त्यो सधैँका लागि पराजित भयो । त्यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिक्यो पनि । तर, अन्तमा त्यसको पराजय भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको विजय भयो । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध चलेको बहुदलीय व्यवस्थाको सङ्घर्षको उदाहरणले के बताउ“छ भने कुनै आन्दोलन कुनै बेला लामो समयसम्म दबे पनि त्यसको अर्थ त्यसको पूरै पराजय होइन र हुन्न । अन्तमा त्यो कुराको फैसला यो कुराले गर्दछ ः वस्तुगत रुपमा त्यसको आधार समाप्त भएको छ वा विद्यमान छ ? समाजवादको विश्वव्यापी रुपमा नै भौतिक आधार विद्यमान छ । त्यो भौतिक आधार हो ः विश्वव्यापी रुपमा उत्पादन प्रणालीको सामाजिक प्रणाली । त्यसकारण, त्यसको भविष्य उज्ज्वल छ ।
समाजवादी आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्धको बहुदलीय आन्दोलनभन्दा कैयौ“ गुणा दीर्घकालीन र अन्तर्राष्ट्रिय मह¤वको आन्दोलन हो । समाजवादको आन्दोलनको इतिहासमा देखा पर्ने पराजय वा प्रतिक्रान्तिका अवस्थाहरु आकार र प्रकार दुवै दृष्टिकोणले कैयौ“ गुणा बढी गम्भीर प्रकृतिका हुन सक्दछन् । तर, ३० वर्षसम्म पराजित भएकाले जसरी बहुदलीय व्यवस्था सधैँका लागि अन्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु हु“दैनथ्यो, त्यसै गरेर अहिले विश्वव्यापी रुपमा समाजवादी व्यवस्थाको अन्त भएको वा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकाले त्यसको अन्त भएको वा त्यसको भविष्य छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु सही हुनेछैन । यो कुरा बुझ्न कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलको तलको कविताले पनि केही मद्दत गर्नेछ ः
तडागमा खडा भयो
फेरि कमलको वन
भित्री बीज छ“दासम्म
मासिन्थ्यो र कुरा कुन
विकास निम्नस्तरबाट उच्चस्तरमा हुने गर्दछ । समाजको अहिलेसम्मको इतिहासले त्यही बताउ“छ । जङ्गली अवस्थाबाट दास युगमा, त्यसपछि सामन्ती र पुँजीवादमा विकासले निम्नस्तरबाट उच्चस्तरमा विकासको गतिलाई नै बताउ“छ । प्रत्येक युगका शासक वर्गहरुले यो सोच्ने वा दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ कि उनीहरुको समाज व्यवस्था नै अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था हो र त्यही नै समाजको विकासको अन्तिम अवस्था हो । त्यसैले, उनीहरुको सम्पूर्ण जोड त्यसको रक्षा गर्नेतिर नै हुन्छ । त्यही प्रकारले पुँजीवादी वर्गहरुले पनि अहिलेको व्यवस्थालाई समाजको सम्पूर्ण रुपले विकसित र समाजको विकासको अन्तिम अवस्था बताउ“छन् । तर, जसरी दास मालिक, राजा वा सामन्त वर्गले आफ्नो समयको समाज व्यवस्थालाई समाजको सबैभन्दा विकसित र अन्तिम अवस्था बताउने दाबी गलत सावित भए, त्यसै गरेर पुँजीवादको वर्तमान व्यवस्थालाई सबैभन्दा विकसित र अन्तिम अवस्था बताउने सोचाइ पनि गलत धारणा हो र इतिहासले उनीहरुको त्यस प्रकारको सोचाइलाई गलत बताउने छ । जसरी अहिलेसम्मका सबै जङ्गली अवस्था, दास युग, सामन्तवाद र पुँजीवादी अवस्थाहरु अन्तिम थिएनन्, त्यसै गरेर समाजवाद पनि अन्तिम अवस्था होइन । त्यसले पुनः आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले साम्यवादी समाजको आधार तयार पार्दछ र स्वयं समाजवादी व्यवस्थाको निषेध गर्दछ । त्यसको ठाउ“ साम्यवादी व्यवस्थाले लिन्छ । साम्यवादी समाज व्यवस्था नया“ शोषणविहीन समाजको प्रस्थान बिन्दु हो । त्यसपछि पहिलेका शोषणप्रधान व्यवस्थाका कैयौ“ चरणहरु भएजस्तै शोषणविहीन समाजका पनि कैयौ“ चरण हुन सक्दछन् । तिनीहरुको स्वरुप कस्तो हुनेछ ? त्यो बेलाको उत्पादक शक्तिहरु वा भौतिक परिस्थितिमा हुने परिवर्तनअनुसार समाजको स्वरुप निर्धारित हु“दै जानेछन् । त्यो अवस्थामा खालि उत्पादन प्रणालीको स्वरुपमा मात्र परिवर्तन हुनेछैन, समाजको सम्पूर्ण संरचना, संस्कृति, सामाजिक चालचलन, मानिसहरुको मनोविज्ञान, मानिसहरुका बीचको सम्बन्धको प्रकृति, स्त्री र पुरूषको सम्बन्ध वा विवाहहरुको रुप, आचरण, नैतिकता आदिका रुपहरु पनि बदलि“दै जाने कुरा निश्चित छ । तर, त्यस प्रकारको परिस्थितिको रुप के हुनेछ ? त्यो बेलाको भौतिक अवस्थाले निश्चित गर्ने कुरा हो । अहिले तिनीहरुका बारे भविष्यवाणी गर्नु सम्भव छैन ।
समग्र रुपमा के भन्न सकिन्छ भने समाजको अहिलेसम्मको इतिहास वा विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतनसमेतले पनि माक्र्सवादी दर्शनलाई गलत सावित गर्दैन । माक्र्सले विकसित गरेको ऐतिहासिक भौतिकवादको सिद्धान्तलाई विश्वको सम्पूर्ण विकासक्रम र घटनाहरुले सही सावित गर्दै आएका छन् । त्यसका आधारमा यो भन्न सकिन्छ कि अहिले विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएको भए पनि वा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै नै कमजोर भएको भए पनि विश्वको विकासक्रम समाजवाद र साम्यवादको दिशामा नै उन्मुख छ । त्यसरी सम्पूर्ण रुपमा समाजवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्ज्वल छ । माक्र्सवादी दर्शनले त्यसका लागि मार्ग प्रदर्शन गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि गर्नेछ ।